Filtrer les éléments par date : mardi, 02 mars 2021
mardi, 02 mars 2021 19:48
Vontovorona : Manao fitokonana ireo mpianatra izao alina izao
Mitaky ny vatsim-pianarana 4 volana sy ny kojakojam-pianarana équipement.
Nisy moa ny Covid-19 teny an-toerana dia nahiboka 15 andro izy ireo, nefa nanaovana digitalisation androany hanomezana bourse 1 volana sy équipement, dia izao nivoaka nandoro pneu izao.
Efa lasa eny an-toerana amin'izao ireo mpitandro ny filaminana, ary nilaza ny andray andraikitra raha misy ny fandrobana na fihoaram-pefy ataon'ireo mpianatra ireo.
Pilo kely : Azony ny nilainy de nentiny nody ny sono
Bonne nuit jiaby
Fifidianana filoham-pirenena : Antananarivo no nifidy be indrindra an'i Andry Rajoelina
Mety nahazo isan-jato maro ny Kandida ho filoham-pirenena Andry Rajoelina, tamin'ny taona 2018 ny fihodonana faharoa, tany amin'ny faritra DIANA, SAVA, Analanjorofo, fa vitsy ny isan'ny mpifidy any, fa ny teto Antananarivo, indrindra fa Analamanga no tena nahazoan'i Andry Rajoelina vato be indrindra 390 592 (15.10% amin'ny totalim-bato azony), manaraka azy eo ny tany Atsimo andrefana 225 956 (8.73%), Analanjorofo 183 307 (7.09%), ary farany kely Betsiboka 19 220 (0.74%).
Fifandrifiana ihany ve, Betsiboka no mbola tsy manana Governoram-paritra hatramin'izao, efa iray taona sy 5 volana aty aoriana nametrahana ireo Governora hafa.
Voatendry tamin’ny 25 septambra 2019 ireo andiana Governoran’ny Faritra voalohany.
mardi, 02 mars 2021 12:21
Vanille : Manao fanamparam-pahefana ny fanjakana foibe
Potika tanteraka ankehitriny ny sehatry ny lavanila, satria dia nitsabahan'ny ministeran'ny varotra any Antananarivo, na ny fanomezana ny fahazoan-dalana hamarotra ny lavanila, na ny fidirany amin'ny famerana ny vidiny.
Nandalo sedra maro ity sehatra lavanila ity teto amin'ny toekaren'i Madagasikara, satria dia mitazona ny fampidiram-bola vahiny betsaka, sy mamelona olona maro.
Misy ny lalàna mifehy izany sehatra izany, ary anisan'ny nandaniana vola sy fotoana nakana ny hevitry ny mpamboly, ny mpanangom-bokatra ary ireo mpamarotra sy mpanondrana any ivelany. Izany dia niarahana tamin'ny fanjakana isam-paritra sy ny foibe hatrany.
Amin'izao dia fahalalahana tanteraka no napetraka amin'ity sehatry ny lavanila ity, afatsy ny fanaraha-maso ny hatsaran'ny vokatra, sy ny famerenana ny vola vahiny eto an-toerana ary ny fandoavana ny hetram-panjakana, satria dia tsy maintsy orinasa ara-dalàna avokoa ireo rehetra misehatra amin'izany, ary ireo mpamboly dia tsy maintsy manana karatra avokoa.
mardi, 02 mars 2021 07:40
Fifamoivoizana : Flyover sa lalana SOFIA
Ny faran'ny volana jolay 2020, dia nanapa-kevitra ny Filankevitry ny minisitra ny hanamboatra ireo FlyOver na teteza-mihantona ambony kihon-dalana miisa roa, dia ny etsy Andohatapenaka/Ampasika, sy ny etsy Anosizato. Voalaza tamin'izay fa atomboka io taona 2020 io ihany ny asa.
Famatsiam-bola mitentina 20 tapitrisa dolara na 75 miliara ariary, avy amin'ny BADEA na ny Banky Arabo ho amin’ny Fampandrosoana aty Afrika, ka ny famatsiam-bola anatiny no ho entina manomboka ny asa, ary ny famatsiam-bola avy amin’ny BADEA kosa no handray ny tohin’ny asa no voalaza tamin'izany.
Fampindramam-bola mandritra ny 30 taona izy io, ary amin’ny zana-bola ambany 1%, ary afaka 10 taona vao hatomboka ny famerenana azy.
Ao anatin’izany ny fanaovan-dalana mirefy 8km sy ny fanamboarana ireo tetezana. Mbola mety hitombo io famatsiam-bola io araky ny fizotry ny fifampiresahana amin’ny BADEA.
mardi, 02 mars 2021 07:39
Radiothérapie, efa nisy tao Befelatanana teo aloha
Ady amin'ny Cancer : Radiothérapie, efa nisy tao Befelatanana teo aloha, ary tsy nandoavam-bola izany, aleo tsy disoana ny zava-misy.
Matoa efa nisy ny trano sy ny blindage ilaina amin'izany toerana izany, dia efa nisy fitaovana fanaovana radiothérapie iadiana amin'ny homamiadana tao Befelatanana, ary tsy nandoavam-bola izany teo aloha. Simba ilay fitaovana teo aloha.
Tsara ny fitaovana vaovao azo, ary azo an-tsaina ny hoe tsy maintsy andoavam-bola izany, fa tokony ho raisin'ny fanjakana an-tanana izany vola lany izay.
Ny radiothérapie dia mila séance 1 mois eo, izany hoe 45 000ar x 30 = 1 350 000ar, tsy zakan'ny olona izany. Rahateo mbola eo koa ny chimio izay mety ataon'ilay marary, izay sady fitsaboana mavesatra no lafo ny vidim-panafody.